राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २०७१ साउन १८ गतेदेखि निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनीमा परिणत हुन सक्ने प्रावधानअन्तर्गत निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई संस्थानबाट अलग गरी छुट्टै सञ्चालन गर्दै आएको हो । आव २०७५/७६ चलिरहँदा कम्पनीले साविकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान निर्जीवन बीमा विभागको आव २०६३/६४ देखि २०६७/६८ सम्मको वार्षिक साधारणसभा असोज १९ गते सम्पन्न गरेको छ ।
आव २०६८/६९ को मुनाफाबाट १२० प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको कम्पनीले बीमा समितिले स्वीकृत नगर्दा अघिल्लो वर्षसम्मको मात्र साधारणसभा गरेको हो । लगानीकर्ताको चर्को आलोचनापछि कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्यायले आगामी ६ महीनाभित्र संस्थानतर्फको बाँकीसहित कम्पनीतर्फको पहिलो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समितिबाट वित्तीय विवरण स्वीकृतिपछि आगामी साधारणसभामा सोही प्रस्तावलाई पेश गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसअघि कम्पनीले आव २०६०/६१ देखि २०६२/६३ सम्मको मुनाफाबाट १ सय १४ दशमलव २७ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । बीमा समितिको निर्देशनमा रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने कम्पनीको हाल रू. २६ करोड ६६ लाख ३९ हजार रहेको छ ।
2018-11-25 - 149 view(s) - abhiyan